I-Mac yam ayizukuqala, ngoku ndenza ntoni? | Ndisuka mac
Okokuqala kufuneka cwaka kwaye ujonge zonke iinketho esinazo zokusombulula ingxaki. Ukuzola kucacile ukuba kunzima xa sijamelene nemeko enje, kodwa lelona chiza lilungileyo kwezi meko kuba ingxaki yethu inokusonjululwa ngendlela elula kwaye nokuba akunjalo kwaye iMac yethu ayinamsebenzi. ayisusi kude uyamkeleka ukuba ube noxinzelelo ngalomzuzu.
I-Mac yam ayizukuqala, ngoku ndenza ntoni? Yenye yezinto ezinokwenzeka nakubani na kwaye ngalo mzuzu sicinezela iqhosha lokuqala leMac yethu kwaye siyabona ukuba ayiqali ngesandi eso (kwimeko yokuba neMacBook Pro 2016 entsha akukho sandi) Kunye nelogo yeapile, kuya kufuneka uphefumle kwaye uphinde inkqubo yokucinezela iqhosha ulinde, ukuba oku akusebenziyo kufuneka ubone ukuba yintoni ingxaki.
1 Isandi siyaviwa kodwa asisebenzi kwisikrini
2 Ngokuqinisekileyo iMac ayizukuqalisa
Isandi siyaviwa kodwa asisebenzi kwisikrini
Ngamanye amaxesha iMac iyaqala, kuvakala isandi sokuqalisa, kodwa isikrini sinokumnyama. Le asiyongxaki inye esinokuba nayo xa iMac yethu ingaqali, kodwa siyishiya apha ukongeza ezinye iinketho kule ngxaki inokwenzeka. Into yokuqala kukuzama ukuqala kwakhona ikhompyuter kwakhona, qhagamshela intambo yombane kwaye uphinde uqalise kwakhona. Ukuba oku akusebenzi singazama ucofa i-Cmd + Alt + P + R xa uqala ikhompyuter kwitshaja xa unqamkile.
Ngale nto siyenzayo ukusombulula ingxaki enokubakho nge-RAM kunye iMac yethu iya kuqala ngaphandle kweengxaki ezinkulu. Kwimeko apho ingasebenzi, kungcono ukubiza i-SAT ngqo ukuzama ukusombulula ingxaki.
Ngokuqinisekileyo iMac ayizukuqalisa
Le yenye yeengxaki ezinokubakho kwabanye abasebenzisi kwaye bahlala besibuza ukuba bangenza ntoni ngeMac engasebenziyo xa ucofa iqhosha lokuqala. Kule meko, njengakwisikrini esimnyama, kufuneka sizole, qiniseka ukuba iMac ixhunyiwe kwikhebula lombane malunga nemizuzu eli-10 kwaye zama ukuvula ikhompyuter amaxesha ambalwa ngaphambi kokwenza nantoni na ngokucinezela iqhosha lokuqala. Ukuba oku akusebenzi sinokuseta kwakhona isilawuli samandla senkqubo kwaye oku kubonakala kunzima kodwa akunjalo. Amanyathelo ekufuneka elandelwe ngalawo kuxhomekeke kuhlobo lweMac esinayo:
Iimodeli zeMacBook (ngaphandle kwebhetri esuswayo): Ngentambo yeMagSafe edityanisiweyo kwaye izixhobo zicinyiwe, siza kubamba isitshixo seShift + Ctrl + Alt + Power Button, okwangoku siza kuzikhulula zonke kwaye ucinezele Amandla kwakhona.
Iimodeli zeMacBook (kunye nebhetri esuswayo): Cima izixhobo kwaye ukhulule iMagSafe, emva koko ususe ibhetri kwaye ubambe iqhosha leMandla okungenani imizuzwana emi-5 kwaye ubeke ibhetri emva. Ngale nto, inkqubo iya kuba igqityiwe.
IMac, iimodeli zeMac mini: Cima iMac yakho kwaye ukhuphe intambo yamandla ubuncinci imizuzwana eyi-15, emva koko uyiplagi intambo kwakhona kwaye ulinde eminye imizuzwana emi-5 ukubuyisela ikhompyutha
Kuyacaca ukuba ukuba umatshini unengxaki nebhetri okanye sine-UPS exhunyiwe ukukhusela izixhobo zethu kumandla ombane, ukuhla okanye ukuphuma kwamandla, iya kuba lixesha lokujonga ukuba isebenza ngokufanelekileyo. Ngamanye amaxesha, notshintsho lwendawo okanye iplagi yezixhobo zethu inokuba ngunobangela wengxaki ukuba akukho kungoku kufikelela kwizixhobo zethu (iMac desktop) kwaye oku ngokucacileyo kuthetha ukuba ayivuli, kodwa kwiimeko ezininzi kukho isisombululo ngaphandle kokuya kwinkonzo yezobugcisa. Kwaye ayisosicwangciso sokwenza izixhobo ukuze kungabikho nto yokususa ibhetri okanye ukuvula iMac ukuze ibone ngaphakathi ...
Ukuba siwenzile onke amanyathelo kwaye iMac yethu ayiqali, into ekufuneka siyenzile kukufowunela iApple ngqo kwaye sicele uvavanyo lokuqala nangona singenasiqinisekiso, kumaxesha amaninzi sicinga ukuba ii-SATs ezivela ngaphandle kwe-Apple zitshiphu kwaye ayisiyiyo, ke okokuqala, nangona singenasiqinisekiso kwizixhobo kungcono ukubuza uluvo lweApple. Ukuba asinayo ivenkile kufutshane nasekhaya, olu khetho luyinkimbinkimbi ngandlela thile, kodwa Singasoloko sifowunela ngaphambili okanye sisebenzise incoko kwi-Intanethi kwiwebhusayithi yeApple ukubona izisombululo ezinokubakho kwingxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » I-Mac yam ayizukuqala, ngoku ndenza ntoni?